Prairie ပြည်နယ်ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်နှင်ထုတ်ခံရမှုအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည် - Prairie ပြည်နယ်ဥပဒေ ၀ န်ဆောင်မှုများ
Prairie ပြည်နယ်ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်နှင်ထုတ်ခံရမှုအတွက်ပြင်ဆင်ထားသည်
by Prairie ပြည်နယ်ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများ | အောက်တိုဘာ 8, 2021 | လတ်တလောသတင်းနှင့်ဆောင်းပါးများ, Uncategorized
The Illinois Eviction Moratorium သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်တနင်္ဂနွေနေ့တွင်ပြီးဆုံးခဲ့သည်။ Prairie ပြည်နယ်ဥပဒေ ၀ န်ဆောင်မှုသည်နှင်ထုတ်ခံရသူများအရေအတွက်တိုးလာသည်ကိုတွေ့နေပြီဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ်ရုံး၏ခန့်မှန်းချက်အရထိုအရေအတွက်သည်“ ၎င်းတို့၏ကူးစက်ရောဂါအကြိုအဆင့်ထက်နှစ်ဆခန့်မြင့်တက်လာလိမ့်မည်” ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ Pre-COVID, Peoria သည်နိုင်ငံအတွင်းနှင်ထုတ်နှုန်းအမြင့်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်နေပါပြီ။
မည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်၏နောက်ခံသို့မဟုတ် ၀ င်ငွေအဆင့်အတန်းမဆိုတရားမျှတစွာတန်းတူညီမျှရရှိရေးသည်တရား ၀ င်အလုပ်၏အမြင့်ဆုံးစံနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Prairie ပြည်နယ်ဥပဒေ ၀ န်ဆောင်မှုများသည်တရားမျှတမှုရရှိရေးသေချာစေရန်နှင်ထုတ်ခြင်းခံရစဉ်ကာလအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ရွာကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးရန်ပြင်ဆင်ထားသည်။
Prairie ပြည်နယ်သည်ရပ်ရွာလူထုအားပညာပေးရန်၊ အကူအညီများပေးသောအေဂျင်စီများစွာနှင့် ပူးပေါင်း၍ အိမ်ငှားများနှင့်အိမ်ပိုင်ရှင်များအားထိုအကူအညီကိုဆက်သွယ်နိုင်ရန်ကူညီပေးသည်။ အိမ်ပိုင်နှင့်အိမ်ငှားအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ Peoria အသိုင်းအဝိုင်းရှိလူများအတွက်သူတို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသောအကူအညီများနှင့်ဆက်သွယ်ရန်အတွက်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းမှာ ၂-၁-၁ (၃၀၉-၉၉၉-၄၀၂၉) သို့ခေါ်ခြင်းသို့မဟုတ်လာရောက်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်သည်။ www.211hoi.org ဖြစ်သည်.
လက်ရှိတွင်နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံး၌တရားရုံးအခြေပြုအငှားအကူအညီအစီအစဉ်ရှိနေပြီးအိမ်လခ ၁၅ လအထိပေးချေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အိမ်ငှားမှစတင်ခဲ့ပြီးအိမ်ရှင်ကပြီးစီးခဲ့သောပူးတွဲလျှောက်လွှာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာတွေ့နိုင်ပါသည် ilrpp.ihda.org သို့မဟုတ် 866-454-3571 ခေါ်ဆိုခြင်းဖြင့်။
အိမ်ငှားများအတွက်အကူအညီကို Phoenix CDS, Salvation Army, PCCEO, St Vincent de Paul ကဲ့သို့သောပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများစွာမှနှင်ထုတ်ခြင်း၊ နှင်ထုတ်ခံရပြီးသူများအတွက်အကူအညီများလည်းရနိုင်သည်။ အကူအညီသည် Illinois မိသားစုများပြည်နယ်တစ်လျှောက်လုံးအစပြုလုပ်ဆောင်မှုသည်ရွေးချယ်မှုအကူအညီများအတွက်လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူမြန်ဆန်စေသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင်ပါသည် www.helpillinoisfamilies.comမရ။ နောက်ဆုံးအနေနှင့် Prairie ပြည်နယ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်အခမဲ့ငှားရမ်းသူများ၏လက်စွဲစာအုပ်နှင့်နှင်ထုတ်ရေးကိရိယာတန်ဆာပလာကဲ့သို့အရင်းအမြစ်များကိုပေးသည်။ www.pslegal.org.
အိမ်ရှင်များနှင့်အိမ်ပိုင်ရှင်များအတွက် ၀ င်ငွေများကြောင့်အိမ်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုကာကွယ်ရန်သိသာထင်ရှားသည့်ရန်ပုံငွေများရှိလိမ့်မည်။ ဤလာမည့်အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်များကို www.ihda.org/haf တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်ပေါင်နှံသူအများစုသည်သက်သာသောပြုပြင်မွမ်းမံထားသောအစီအစဉ်များနှင့်သည်းခံခြင်းအစီအစဉ်များအပါအ ၀ င်သက်သာသောရွေးချယ်စရာများရှိသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအိမ်ရှင်များနှင့်အိမ်ပိုင်ရှင်များလာရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည် www.consumerfinance.gov/coronavirus/mortgage-and-housing-assistance.
နှင်ထုတ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအကြံဥာဏ်များအတွက်အိမ်ပိုင်ရှင်များနှင့်အိမ်ငှားများသည် Eviction Help Illinois သို့ ၈၅၅-၆၃၁-၀၈၁၁ သို့ဖုန်းခေါ်။ Eviction Help ကို ၁-၈၄၄-၉၃၈-၄၂၈၀ သို့စာတိုပို့ခြင်း၊ www.evictionhelpillinois.orgမရ။ နှင်ထုတ်ခြင်းအကူအညီ Illinois သည်အခမဲ့တရား ၀ င်အကူအညီများ၊ ဖျန်ဖြေ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အခြားအကူအညီများသို့ဆက်သွယ်မှုများပေးနိုင်သည်။ Prairie ပြည်နယ်သည်ဤအစီအစဉ်တွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်သောကြောင့် Peoria ဧရိယာငှားရမ်းသူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုံးသို့တရား ၀ င်အကူအညီများရဖွယ်ရှိသည်။
၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် Prairie State သည်အရည်အချင်းပြည့်မှီသူများကိုလျင်မြန်စွာစစ်ဆေးရန်နှင့်သင်၏ဖောက်သည်များအားအိမ်ရာရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ရန်ပိုမိုအဆင်ပြေစေသောရည်ညွှန်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်ပေးသည်။ နှင်ထုတ်ခြင်း၊ မျှတသောအိမ်ရာများ (သို့) နေ ၀ င်မှုစသည့်အိမ်ရာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပုံကိုဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အဆင်သင့်ရှိပါသည်။
ရှေ့နေများအတွက် Prairie ပြည်နယ်သည်နှင်ထုတ်မှုအရှိန်ကိုအထူးဖြေရှင်းရန်ခိုင်မာသော pro bono အစီအစဉ်တစ်ခုကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ သင်သည်ရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်လျှင်စေတနာ့ဝန်ထမ်းလိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ ဤစီမံကိန်းတွင်ပါ ၀ င်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏အချိန်ဇယားနှင့်ကိုက်ညီရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ပြီးဖောက်သည်များအားဖုန်းဖြင့်အကြံပေးခြင်းပါ ၀ င်သည်။ Prairie ပြည်နယ်သည်လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုအပြင်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုကိုပါပံ့ပိုးပေးသည်။
Prairie ပြည်နယ်၏ Peoria ဌာနခွဲသည် Peoria County နှင့် Tazewell ကောင်တီမှနှင်ထုတ်ခြင်းတရားရုံးခေါ်ဆိုမှုတိုင်းတွင်ရှေ့နေနှစ် ဦး ပါ ၀ င်ရန်၎င်း၏ Eviction Court Clinic Project ကိုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ အိမ်ငှားများသည်၎င်းတို့၏အခွင့်အရေးများ၊ တာဝန်များနှင့်ရွေးချယ်ခံရသူများအားနှင်ထုတ်ခံရသည့်တရားရုံးတွင် ဦး စားပေးအနေနှင့် ဦး စားပေးအနေနှင့်ကိုယ်စားပြုမှုပေးနိုင်သည်။ တစ် ဦး ချင်းစီသည် ၃၀၉-၆၇၄-၉၈၃၁ သို့တနင်္လာနေ့မှကြာသပတေးနေ့၊ နံနက် ၉ နာရီမှနေ့လည် ၁ နာရီသို့အွန်လိုင်းမှ ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ www.pslegal.org.
 သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၊ Merrick B. Garland၊ ရှေ့နေချုပ် (သြဂုတ် ၃၀၊ ၂၀၂၁)၊ https://www.justice.gov/ag/page/file/30/download
 နှင်ထုတ်ခြင်းအဆင့်များEviction Lab, https://evictionlab.org/rankings/ (နောက်ဆုံးအကြိမ်အောက်တိုဘာလ ၈ ရက်၊ ၂၀၂၁)
Prairie ပြည်နယ်ဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊
411 Hamilton Blvd၊ Ste 1812
Peoria, IL ၆၁၆၀၂